Ra’iisul wasaare Kheyre oo la kulmay qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Kheyre oo la kulmay qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed (SAWIRO)
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa maanta kullan la qaatay qaar kamid ah haweenka Soomaaliyeed, wuxuuna kala hadley qaabkii la iskaga kaashan lahaa shaqada dalka ka socto haweenkuna ay qayb tooda uga qaadan lahaayeen howsha Qaran, waxaana kullankaan soo qaban-qabiyay wasaarada haweenka iyo xaquuqul insaanka ee Soomaaliya.
Qaar kamid ah haweenkii kasoo qayb galey kullanka ayaa cadeeyey inay garab taagan yihiin dowlada isla markaan ay ka qayb qaadanayaan dib u dhiska dalka iyo xasilinta amniga,waxeyna ku dhiiri galiyeen ra’iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xukuumadiiisa sida dardarka leh ee ay shaqada u wadaan.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaaa sheegey in haweenku ay yihiin laf dhabarka bulshada sidoo kalena ay u nugulaayeen dhibaatooyinkii ka dhici jirey dalka kuwaasoo ay goob joog u ahaayeeen, sidaas dardeedna loo baahan yahey inay hurmuud u noqdaa sidii loo wacyi galin lahaa dadka taasin ay fududayneyso in bulshada la fahansiiyo muhiiimada dowladnimada.
Ra’iisul wasaare Khayre ayaa tilmaamey in haweenka Soomaaliyeed ay door muhiim ah ku leeyihiin a dib u dhiska dalka iyo soo celinta sharftii ay la haayeen dadka Soomaliyeed, waxuuna uga mahed celiyey xiligii uu dalku ku jirey burburka sidii ay hawenku iski xilqaameen una bad-baadiyeen qaybaha kala duwan ee shacabka.
“Waan la soconaa dhibaatooyinka ay la kulmaan haweeenka Soomaaliyee oo ay ugu horeyso kufsiga iyo in mararka qaar la dulmiyo wixii ay xaq u lahaayeenn, balse waxaaa looga baahan yahay haweenkeenu iney is abaabulaan una diyaar garoobnaan dib u dhiska dalka bulshadana ay ku dhiri galiyaan iney aamniaan dolwadooda si loo gaaro horumar iyo nabad” Ayuu yir ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Kullankan waxuu qeyb ka noqonayaa shirar gooni gooniya oo ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu la yeelanayey qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed si uu ula wadaago talooyinka dalka.